Suuqa Baaskiilka Xamuulka (Tirada Giraangiraha: Laba Taayir, Saddex Gaadhi, iyo Afar Gaadhi; Codsiga: Bixiyaha Adeegga Courier & Parcel, Alaab -iibiyaha Weyn, Gaadiidka Shakhsi ahaaneed, Qashinka, Adeegyada Dawladda Hoose, iyo kuwa kale; Baahinta: Baaskiilka Xamuulka ee Korontada iyo Diesel/Baasiin. Baaskiilka xamuulka; iyo Lahaanshaha: Isticmaalka Shakhsi ahaaneed iyo Isticmaalka Ganacsiga/Maraakiibta)-Falanqaynta Warshadaha Caalamka, Cabbirka, Wadaagga, Kobaca, Isbeddellada, iyo Saadaasha, 2020-2030
Xooga la saaro yaraynta ciriiriga taraafikada iyo ilaalinta deegaanka si kor loogu qaado iibka
Marka laga eego dhinaca saadka, labada lugood ama baaskiiladaha ayaa weli ah doorashada koowaad ee macaamiisha adduunka. Intaa waxaa dheer, sababa la xiriira bay'ada, saadka, falsafadda, iyo arrimaha dhaqaalaha, baahida loo qabo baaskiilada ayaa si joogto ah uga sarraysa tan baabuurta gaar ahaan gobollada soo koraya sida Asia Pacific, Latin America, iyo Bariga Dhexe & Afrika. Baaskiiladaha xamuulka ayaa caan ku noqday sanadihii ugu dambeeyay, taas oo ay ugu wacan tahay adeegsiga sare ee ku habboonaanta, baahida ugu yar ee dayactirka, iyo bararka caqabadaha la xiriira taraafikada, gaar ahaan gobollada magaalooyinka adduunka oo dhan.
Iyada oo waddooyinka magaaladu ay si xowli ah u xanniban yihiin, baaskiiladaha xamuulka ayaa u soo ifbaxay mid ka mid ah habka ugu wax -ku -oolsan uguna habboon ee gaadiidka shirkadaha xamuulka taas oo sababtay, baahida loo qabo baaskiilada xamuulka ayaa si joogto ah ugu dhaqaaqday jihada sare sannadihii ugu dambeeyay- isbeddel ay u badan tahay inuu sii socdo muddada saadaasha. Iyada oo la raacayo tallaabooyinka sharciyeynta ee socda si loo ilaaliyo bay'ada, ciyaartooyda ka howlgasha suuqa baaskiilka xamuulka ayaa si aad ah diiradda u saaraya soo saarista baaskiilada xamuulka korontada. Tiro ciyaartooy ah oo ka hawlgala suuqa baaskiilka xamuulka ayaa la filayaa inay ballaariyaan waxsoosaarka alaabada sanadaha soo socda.
Dhamaadka arrimahan oo ay weheliso koror aad u badan oo ah tirada alaab -bixinta ganacsi ee magaalooyinka gobollada kala duwan, suuqa baaskiilka xamuulka ee adduunka ayaa la filayaa inuu dhaafo sumadda US $ 6.3 Bn dhammaadka 2030.
Dalabka Gobolka Horumarsan oo Kacaaya; Baaskiiladaha xamuulka ayaa caan ku noqday xalka saadka ee ku habboon deegaanka
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, dawladaha iyo hay'adaha kale ee maamula, gaar ahaan gobollada horumaray, ayaa si isa soo taraysa u samaynaya dadaallo wax looga qabanayo caqabado kala duwan oo la xiriira gaadiidka iyo saamaynta ay ku leeyihiin deegaanka. Dhowr dawladood iyo sidoo kale ururada aan dawliga ahayn ee adduunka oo dhan waxay u janjeeraan inay kordhiyaan qaadashada baaskiiladaha xamuulka sida beddelka gaadiidka saadka ee magaalada ku habboon. Yurub gudaheeda, Mashruuca Baaskiilka Xamuulka Beddelka Magaalada ayaa ugu horreyn ujeeddadiisu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegsiga baaskiiladaha xamuulka si caafimaad leh, meel-badbaadin ah, deegaan-saaxiibtinimo leh, iyo hab wax-ku-ool ah oo gaadiid labadaba, gaar ahaan iyo sidoo kale adeegsiga ganacsiga.
In yar oo ka mid ah mashaariicda la midka ah ee Yurub oo dhan iyo sidoo kale gobollada kale ee adduunka ayaa la filayaa inay saamayn togan ku yeeshaan suuqa baaskiilka xamuulka ee adduunka inta lagu jiro xilliga saadaasha. Kororka tirada badan ee mashaariicda noocan oo kale ah ayaa la rajaynayaa inuu ka dhaadhiciyo wacyigelin caan ah daneeyayaasha ka hawlgala qaybaha ganacsiga, dadweynaha, iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. Kordhinta adeegsiga baaskiilada xamuulka ee saadka gaarka ah & ganacsiga iyo codsiyada aan joogsiga lahayn ayaa tilmaan cad u ah in baaskiilada xamuulka ay si dhakhso leh caan uga yihiin adduunka oo dhan.
Intaa waxaa sii dheer, quruumaha sida Jarmalka, sanadka 2019, iibinta baaskiilada xamuulka korantada ayaa ka sarraysay baabuurta korantada. Magaalooyin badan oo Yurub ah, oo ay ku jiraan Amsterdam iyo Kobanheegan ayaa hormuud u ah isticmaalka baaskiilada xamuulka sida hab waara oo gaadiid.
Ciyaartoyda Suuqa waxay xooga saaraan ballaarinta Boortoorka alaabta si ay u helaan Faa'iido
Dhowr shirkadood oo ka shaqeeya warshadaha xamuulka, oo ay ku jiraan DHL, UPS, iyo Amazon ayaa muujiyey rabitaankooda ah inay tijaabiyaan kartida baaskiilada xamuulka ee Magaalada New York, waxayna soo bandhigeen barnaamij tijaabo ah si loo yareeyo ciriiriga taraafikada qaybo ka mid ah Manhattan. Hay'adaha dawladda hoose sida Waaxda Gaadiidka Magaalada New York ayaa si isa soo taraysa diiradda u saaraya qiimeynta amniga iyo suuragalnimada baaskiilada xamuulka. Ciyaartoyda suuqa ee ka hawlgala suuqa baaskiilka xamuulka ee hadda jira ayaa si isa soo taraysa diiradda u saaraya ballaarinta alaabta wax soo saarka iyo bilaabista baaskiilada xamuulka si ay u xoojiyaan booskooda suuqa.
Tusaale ahaan, bishii Agoosto 2020, Tern waxay ku dhawaaqday bilaabista baaskiil xamuul koronto oo cusub kaas oo inta badan loogu talagalay isticmaalka gobollada magaalooyinka. Sidoo kale, bishii Luulyo 2020, Raleigh wuxuu ku dhawaaqay bilaabista noocyo cusub oo ah baaskiilada xamuulka korontada.
Magaalooyinka Adduunka oo idil waxay mudnaanta siiyaan Gaadiidka Kaarboon-yar-yar inta uu socdo Faafida COVID-19
Dillaaca cudurka faafa ee COVID-19 ayaa la filayaa inuu saameyn dhexdhexaad ah ku yeesho kobaca guud ee suuqa baaskiilka xamuulka ee adduunka 2020. Tiro ka mid ah magaalooyinka adduunka ayaa mudnaanta siiyay xalalka gaadiidka sinnaanta iyo kaarboonka hooseeya, oo ay ku jiraan baaskiil wadista iyo lugaynta xaqiijinta ammaanka dadka deggan. Intaa waxaa dheer, iyadoo ay sii kordhayaan kiisaska adduunka oo dhan, baaskiiladaha xamuulka ayaa u soo baxay inay yihiin mid ka mid ah kuwa ugu nabdoon uguna macquulsan gaadiidka si loo dhammaystiro gaarsiinta, adeegyada dhibic-tilmaameedka, iyo gaarsiinta maylka ugu dambeeya. Intaa waxaa sii dheer, maadaama baaskiilada xamuulka si fudud loo nadiifin karo marka la barbardhigo gawaarida ama gawaarida xamuulka qaada, baahida loo qabo baaskiilada xamuulka inta uu socdo masiibada COVID-19 ayaa sii kordheysa.
Suuqa baaskiilka xamuulka adduunka ayaa la filayaa inuu ku fido CAGR ~ ~ 15% inta lagu jiro xilliga qiimeynta. Diirada sii kordheysa ee lagu yareynayo ciriiriga taraafikada, yareynta qiiqa kaarboonka, iyo adeegsiga xalalka gaadiidka waara ayaa sii ahaan doonta qodobka ugu muhiimsan ee horseedaya suuqa baaskiilka xamuulka inta lagu jiro xilliga saadaasha. Intaa waxaa dheer, tiro ka mid ah mashaariicda dawladda, gaar ahaan gobollada horumaray, waxay u badan tahay inay kordhiyaan wacyiga ku saabsan baaskiiladaha xamuulka ee saamilayda qaybta gaadiidka taas oo ay sabab u tahay, iibinta baaskiilada xamuulku inay sii kordhayso.
Suuqa Baaskiilka Xamuulka: Guudmarka
Suuqa baaskiilka xamuulka ee caalamiga ah ayaa la filayaa inuu ku sii fido CAGR oo ah ~ 15% inta lagu jiro xilliga saadaasha, taas oo ay ugu wacan tahay kororka isbeddelka macmiilka ee ku aaddan dukaamaysiga internetka ee adduunka oo dhan. Kordhinta tirada baabuurta gudbisa, sida kuwa yar yar ama kuwa xamuulka qaada, ayaa sii kordhineysa ciriiriga taraafikada. Tusaale ahaan, tirakoob ay samaysay Dawladda UK ayaa sheegaya in baabuurtu ay 15% ka tahay wadarta guud ee taraafikada guud ahaan England sannadka 2019. Cidhiidhiga waddooyinka ayaa sababa shilal waddo iyo waqti iyo shidaal lumis.
Magaaleynta ayaa ku sii kordheysa gobollada kala duwan ee caalamka. Bishii Maajo 2018, Qaramada Midoobay ayaa warsaxaafadeedkeeda ku sheegtay in 55% dadka adduunka ku nool ay deggan yihiin magaalooyinka, kuwaas oo la filayo inay gaaraan 68% marka la gaaro 2050. Korodhka magaaleynta ayaa kor u qaaday tirada baabuurta waddooyinka iyo hawlaha dhismaha, taas oo keentay ciriiri iyo isku socodkii gaadiidka.
Darawalada Suuqa Baaskiilka Xamuulka
Sare u kaca qiiqa gaadiidku waa walaaca ugu weyn adduunka oo dhan. Kordhinta tirada safarada gudbinta xamuulka ayaa sii kordhineysa heerarka qiiqa. Tusaale ahaan, Midowga Yurub wuxuu sheegayaa in safarada gudbintu ay ku dhawaad ​​15% ka yihiin dhammaan safarada magaalooyinka ee waddamada Yurub oo dhan, taas oo keenta xaddi badan oo isticmaalka shidaalka iyo qiiqa.
Dhowr wakaaladood oo masiibooyinka dawladda ah oo ay ka mid tahay Xafiiska Maareynta Degdegga ah ee Arlington ayaa adeegsanaya baaskiilado xamuul ah si ay u qaadaan badeecadaha halka baabuurta kale ee gaadiidka aysan awoodin inay raacaan inta lagu jiro khataraha. Intaa waxaa dheer, Xiriirka Baaskiillada Yurub wuxuu dhiirrigeliyaa isticmaalka baaskiilada xamuulka inta lagu jiro xaalad degdeg ah ama masiibooyin dabiici ah. Markaa, kordhinta codsiyada aan caadiga ahayn waxay sii hurinayaan baahida loo qabo baaskiilada xamuulka ee adduunka.
Dawladaha adduunka oo dhan ayaa bilaabaya barnaamijyo lagu yaraynayo saamaynta taban ee kobcinta magaalaynta iyo tirada baabuurta ee deegaanka. Dawladuhu waxay dadka ku dhiirri -gelinayaan inay qaataan xalalkan si ay ugu beddeshaan gaadiid -dhaqameedka caadiga ah, taas oo ay ugu wacan tahay faa'iidooyinka ay bixiyaan baaskiilada xamuulka sida dhimista ciriiriga taraafikada iyo sii -deynta qiiqa dabada.
Caqabadaha Suuqa Baaskiilka Xamuulka
Faafida COVID-19 waxay sababtay in inta badan ganacsiyada adduunka oo dhan ay burburaan, sababtuna tahay xiritaanka qasabka ah ee wax-soo-saarka iyo wax-soo-saarka. Tani waxay horseeday in dhaqaalaha adduunku uu qandaraas ku gaaro heerka ugu hooseeya ee koritaanka. Inta badan meheradaha warshado kasta waa kuwo ku -tiirsane ah waxayna qayb ka yihiin silsiladda sahayda ee suuqa. Carqaladeynta silsiladda sahayda oo loo aaneynayo joojinta adeegyada gaadiidka iyo dhoofinta iyo baahida loo qabo baabuurta adduunka oo dhan waxay u badan tahay inay sababto in warshadaha baabuurta ee adduunka ay qandaraas ku galaan Q1 iyo Q2 ee 2020.
Xaddidnaanta farsamada ee baaskiilada xamuulka ayaa caqabad ku ah waxqabadkooda, sidaas darteedna waxay caqabad ku tahay korsashadooda xamuulka culus iyo kuwa fog-fog. Baaskiilada xamuulka ee korontada ayaa leh baytariyo yar yar, kuwaas oo xaddidaya cabbirkooda waxayna u baahan yihiin lacag -celin joogto ah. Kaabayaasha aan horumarsanayn ee ku dallacidda baabuurka korontada ayaa ka dhigaysa baaskiilada xamuulka korontada mid aan loo adeegsan karin gaadiidka fog-fog. Tani waxay abuureysaa baahida loo qabo tikniyoolajiyadda batteriga oo horumarsan, taas oo ay u badan tahay inay fidiso baaxadda baaskiilada xamuulka.
Qaybta Suuqa Baaskiilka Xamuulka
Suuqa baaskiilka xamuulka ee adduunka ayaa loo kala qaybiyey iyadoo lagu saleynayo tirada giraangiraha, dalabka, kicinta, lahaanshaha, iyo gobolka
Iyada oo ku saleysan tirada giraangiraha, saddexda qaybood ee taayirada ayaa xukuma suuqa baaskiilka xamuulka ee adduunka. Saddex baaskiil oo xamuul ah ayaa bixiya gaadiid aad u deggan, marka la barbardhigo midka ay bixiyaan laba baaskiil oo xamuul ah. Intaa waxaa dheer, dheelitirka ay bixiyaan saddex giraangiraha ayaa u saamaxaya carruurta aan qaangaarka ahayn inay sidoo kale wadaan baaskiilka xamuulka. Raacday ilaa saddex taayir, labada qaybood ee taayirada ayaa sidoo kale lagu qiyaasay inay qayb weyn ku leeyihiin, xagga dakhliga, muddada saadaasha.
Iyada oo ku saleysan dalabka, qaybta adeegga farriimaha & baakadaha ayaa qayb weyn ka qaatay suuqa baaskiilka xamuulka ee adduunka. Kordhinta doorbidista dukaamaysiga eCommerce -ka ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee kor u qaadaya qaybiyaha adeegga iyo boorsooyinka. Macaamiisha waxaa laga iibsan karaa intarneedka iyada oo loo marayo baaskiilka xamuulka ama kiraynta baaskiilada xamuulka; sidaa darteed, dhowr dukaan oo tafaariiqda internetka ah iyo shirkado ayaa diiradda saaraya ballaarinta ganacsiga ee gobollada kala duwan si kor loogu qaado gaaritaankooda ganacsi ee caalamiga ah.
Suuqa Baaskiilka Xamuulka: Falanqaynta Gobolka
1. Ku saleysan gobolka, suuqa baaskiilka xamuulka ee caalamiga ah waxaa loo kala saaray Waqooyiga Ameerika, Aasiya Pacific, Yurub, Latin America, iyo Bariga Dhexe & Afrika
2. Waqooyiga Ameerika iyo Yurub waxaa la saadaalinayaa inay noqdaan suuqyo aad u faa'iido badan inta lagu jiro xilliga saadaasha. Dawladda UK waxay maalgelisay siyaabo badan si ay u taageerto qaybinta baaskiilada xamuulka. Intaa waxaa sii dheer, baahida loo qabo baaskiilada xamuulka ayaa ku sii kordheysa Faransiiska, Spain, iyo Nederland, taas oo ay u badan tahay inay kiciso suuqa. Kordhinta wacyiga ku saabsan baaskiilada xamuulka ee Waqooyiga Ameerika oo dhan ayaa la saadaalinayaa inay shidaal ka noqoto suuqa baaskiilka xamuulka ee gobolka.
Suuqa Baaskiilka Xamuulka: Muuqaalka Tartanka
Ciyaartoyda muhiimka ah ee ka hawlgala suuqa baaskiilka xamuulka ee caalamiga ah waxaa ka mid ah
Hiliblayaasha & Baaskiiladaha
Cezeta, Warshadda Douze SAS
Shirkadda Gawaarida Energica, Kooxda Govecs
Shirkadda KTM AG
Rad Power Baaskiilada LLC
Shirkadda Vmoto Limited
Lacag bixinta soo socota ee saamiyada Yadea Group Holding Ltd.
Baaskiilada Xamuulka Xamuulka ee Yuba
Ciyaartoyda muhiimka ah ee ka hawlgala heer caalami ayaa ballaarinaya raadkooda iyagoo ku hawlan isku biirinta iyo iibsiga dhowr ciyaartoy oo ka tirsan warshadaha. Bishii Sebtember 2019, Mahindra & Mahindra waxay ka fureen warshad cusub Washington DC, US, si ay u xoojiso joogitaankeeda Mareykanka oo dhan, waxayna shirkaddu gelisay ku dhawaad ​​$ 1 Bn ballaarinta xarunteeda wax -soo -saarka ee Niu International waxay ka soo saartaa inta badan dakhliyada iibka ee mootooyinka elektiroonigga ah si loogu qaybiyo khadka tooska ah ama si toos ah macaamiisha internetka tooska ah. Shirkaddu waxay qaadatay qaab tafaariiqle ah oo omni-channel ah, oo isku daraya kanaalada tooska ah iyo kan tooska ah, si ay u iibiso mootooyinka elektaroonigga ah.
Waqtiga dhejinta: Mar-12-2021
Cidhiidhiga Baaskiilka, Baaskiilka Buluuga ah ee Fudud, Puck Side Stand, 22.5 Daboolida Gawaarida, E Biyo -mareenka, Best Battery Battery Charger Battery,